WaubeekHouse6 Parry Isandi
Eli gumbi libonelela ngebhedi ephindwe kabini kumgangatho wesibini kunye negumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo kunye nekhitshi. Sinikezela ngamaxabiso oqoqosho asekelwe kwiindwendwe ezihamba zodwa. Umrhumo wondwendwe lwesibini. Sinikezela nge-WIFI, iibhafu ezi-2 ekwabelwana ngazo / ikhitshi. Inja yesilo-qabane INOKWAMKELWA ngee-$25 ngobusuku (masithethe). Iikayak ezimbini ezifumanekayo ukurenta. Umzila kaloliwe oxakekileyo ukufuphi. Sibonelela ngegumbi lokulala eliphakathi kunye netafile yokusebenza, isitulo, isinxibo, indawo yokupaka, itawuli, izinto zangasese, kunye nobugcisa obunokonwaba. Ezinye iindwendwe okanye abanini kwisiza nabo.
IWaubeek House yindlu yeendwendwe ezinkulu ezibomvu eyakhiwa ngo-1908 kwaye sele ibuyiselwe. Likhaya elikhulu elinamagumbi amathathu anamagumbi eendwendwe aphakathi kumgangatho wesibini nowesithathu. Iindonga zipeyintwe mhlophe, iifestile ezinde zinezigqubuthelo, imigangatho ngamaplanga aqinileyo okanye ivinyl. Kukho iisilingi eziphakamileyo kumgangatho wesibini ngelixa amagumbi omgangatho wesithathu, awayeyindawo yokuqala ekwiattic, enophahla oluthe tye kwaye anokufudumala ngobusuku obushushu ngokwenene. Igumbi ngalinye lixhotyiswe ngesitshixo socango kunye nesitshixo, iilinen ezisemgangathweni, imilenze emibini ngebhedi, itawuli enye ngomntu ngamnye, izinto zangasese, ifeni encinci, isibuko, i-dresser, i-hangers. Abamkeli bakho bahlala kumgangatho ophambili kunye nenja yabo. Njengedolophu kaloliwe, sikufutshane nenkqubo kaloliwe exakekileyo. Sinikezela ngeeplagi zendlebe kwigumbi ngalinye. Ngelixa umamkeli wakho enokuthi adibane nawe xa ufika, oku akusoloko kusenzeka. Uya kunikwa ikhowudi yepad yesitshixo. Indawo yokungena eWaubeek House ihamba ngezinyuko zangaphandle. Inombolo yegumbi lakho ihambelana nenombolo engaphakathi kwegama lakho lokubhukisha njengeWaubeekHouse1 igumbi loku-1 njalo njalo. Amagumbi abekwe kumgangatho wesibini nowesithathu. Baneefestile ezinkulu ezimbini okanye ezintathu ezivulekileyo. Amagumbi amabini okuhlambela amakhulu ekwabelwana ngawo abekwe kumgangatho wesibini. Enye iphumile kwiholo enkulu kwaye enye iphumile ekhitshini. Abantwana kunye nenja enye yasekhaya bamkelekile ukuba bahlale kwigumbi lakho. Amagumbi alungele undwendwe olunye kodwa anokuhlala amabini. Ngelishwa asiboneleli ngeebhedi okanye iibhedi okanye izitulo eziphezulu. Ukuba unomdla wokuhlala ixesha elide, siyakwazi ukulungiselela oku. Isantya esiphezulu se-WIFI siyafumaneka kwaye sisebenza kakuhle kuzo zonke iindawo. Indawo yeendwendwe ixhotyiswe ngomsi kunye ne-carbon monoxide detectors, izixhobo zokucima umlilo ezi-6 zifumaneka kwiholo yomgangatho wesibini, i-kitchenette kunye ne-closet, i-landings yesibini neyesithathu kunye ne-cabin. Sibekwe kufutshane neendawo zokutyela, edolophini, iilwandle ezinkulu, ithala leencwadi kunye nesibhedlele. Unokuhamba ngokulula, ibhayisekile okanye uqhube ukuya kwimisitho yasekhaya. Siluhambo olufutshane ukuya kwiipaki ezininzi zikamasipala nezephondo. I-Parry Sound ibonelela ngamathuba amahle okubhabha, ukukhwela isikhephe, ukuqubha, ukukhwela inqanawa kunye nephenyane. Yindawo entle yamaxesha amane enemisebenzi emininzi. Enkosi ngokukhetha iWaubeek House njengendlu yeendwendwe ozikhethele yona! Jonga ezinye izintlu zeWaubeekHouse ukuba ufuna ngaphezu kwegumbi elinye lokuhlala kwakho.
4.70 ·Izimvo eziyi-43
Intle kwaye ikufuphi nolwandle kunye nedolophu. Iivenkile ezinkulu zeencwadi ezikufutshane! Kuninzi ekufuneka kwenziwe apha!
Kancinci okanye kakhulu njengoko ufuna.